CDI Christian Disciple International အဖွဲ့ မှ မြန်​မာပြည်​ (​မှော်​ဘီ)
CDI Christian Disciple International အဖွဲ့ မှ မြန်​မာပြည်​ (​မှော်​ဘီ) မှာ ၅ရက်​ သင်းအုပ်​များအတွက်​ သင်​တန်း Camp ပို့ချ ခဲ့ပါတယ်​။
.. အ​မေရိကား CDI ဆရာ ၂ဦး Paul Miller and Dr.Rick Cross
...စင်​ကာပူမှ Pastor Kim Seng (C.O.S Church Of Singapore) and Financial Teach by Esther.
Read more: CDI Christian Disciple International အဖွဲ့ မှ...
မိမိဘ၀အသက်တာနှင့်ငွေကြေး = ဒီလောကမှာ လူတိုင်းငွေလိုချင်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
... ဘာသာရေးအမြင် (ဘုရားအမြင်) ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။
တတိယအမြင်ကတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအမြင်ကို မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။ မိမိ မိသားစု၊ အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲ ဆွေးနွေး ကြဖို့ပါ။ အမြင်တွေတော့ တူမှာမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယန်ဘာသာရေး အမြင် ဖြစ်လို့ ခရစ်ယန်မဟုတ်သူများ လေ့လာဖို့
Read more: မိမိဘ၀အသက်တာနှင့်ငွေကြေး = ဒီလောကမှာ...
++အသစ်သောမွေးဘွားခြင်း Ehsehwah Saw (ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းများ)
ကျမ်းစာ၌ နိကောဒင်အမည်ရှိသော သူတယောက်သည် ညအခါ သခင်ယေရှုထံ စကားပြောရန်လာခဲ့၏။ ထိုသူသည် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူ၊ ယုဒတရားဇရပ်သို့ သစ္စာရှိစွာမှန်မှန်တက်သူ၊ များစွာဆုတောင်းသောသူ၊ အလှူပေးသောသူ၊ ကောင်း သော အမှုများကို ပြုသော သူဖြစ်၏။ သို့သော်လည်းသူ၏အသက်တာ၌
Read more: ++အသစ်သောမွေးဘွားခြင်း Ehsehwah Saw...
ယောင်္ကျား များအတွက် သတိကြီးစွာထားရန် 3G
Murann Ezine added2new photos.
September 15 at 4:13am ·
ပထမပုံကတော့ ရန်သူ သားရဲတွေကို အောင်နိုင်ပေမဲ့ နေ့တိုင်း ယမကာယစ်မူးတဲ့ ယောင်္ကျား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင် သူမသေရင် တိုင်းပြည်သေပါမယ်။
Read more: ယောင်္ကျား များအတွက် သတိကြီးစွာထားရန် 3G
မြန်မာဂိဒေါင် သာသနာပြုမျာ ၉၈ဦး ကလေးမြို့ တလတာသင်တန်း ပြီးစီး။ မတ်လ ၂၀၁၇
ပုသိမ်မြို့ မြေပြန့်သာသာနာ ဓမ္မဆရာများဖြစ်သော ဆရာဟန်ရင်(ယောန)၊ ဆရာထိန်လင်း နှင့် ၆ယောက်တို့ ..တလတာသင်တန်းကို ကလေးမြို့တွင် မိတ်သဟာရအတူ ကြသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ လာရောက်သူ ၃ဦး ဆရာဦးဂင်ခန့်ခွါလ် နှင့် မိတ်ဆွေများ တလကျော်
Read more: မြန်မာဂိဒေါင် သာသနာပြုမျာ ၉၈ဦး ကလေးမြို့...
နံနက်၇နာရီ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း နဲ့ ဆန်းဒေးစကူး သီဆိုချီမွမ်းခြင်း ဆရာမ မူဆဲလေ ဖူမြစံ ကျမ်းစာကျောင်း ဆရာမ
Murann Ezine added5new photos.
February 12 at 8:53am ·
နံနက်၇နာရီ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း နဲ့ ဆန်းဒေးစကူး သီဆိုချီမွမ်းခြင်း
၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇
Read more: နံနက်၇နာရီ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း နဲ့ ဆန်းဒေးစကူး...
ကျေးဇူးတော်မနက်ခင်းပါ။ ကောင်းကြီးနှင့်ကောင်းကြီးပေးပိုင်ရှင်(သို့)ကောင်း ကြီးပေးသောဘုရားအကြောင်း
Zaw Thu Linn with Phoebe KunZaw and 51 others.
July6at 7:09pm · Reston, VA, United States
Read more: ကျေးဇူးတော်မနက်ခင်းပါ။...
ဒေးဗစ်နှင့်ယော်နသန် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ...UBDavid.Org
ယခုကျမ်းစာ လေ့လာခြင်းများဟာ ပိုပြီးထူးခြားစွာလေ့လာလိုတဲ့ အရွယ်ရောက်သူများ နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးသားထားပေမဲ့ လွယ်ကူတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးများ သုံးထားလို့ အဘိဓါန်စာအုပ် သုံးစရာတောင် မလိုလောက်ပါဘူ။ ဒီအခဏ်းမှာ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း
Read more: ဒေးဗစ်နှင့်ယော်နသန် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း...
UBDavid.org Welcome to Youth World! - Bible Study
Lessons in YOUTH WORLD will help prepare you both for this life and for the life everlasting. As you work through these Bible-based lessons God will build spiritual maturity into your life enabling you to be the young person God has designed you to be.
Read more: UBDavid.org Welcome to Youth World! - Bible Study
သခင့်ဘုန်းအမှုတော် သာသနာကို ယုဒသန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်
ခရစ်တော်နှင့်လျောက်လှမ်းခြင်း Going On With Christ စာအုပ်ငယ်လေးများ (ခရစ်ယန်အသက်ရှင်မှုကိုလေ့လာခြင်း )
၁။ ခရစ်တော်၌ရှိသောအသက်တာသစ် New Life In Christ
၂။ ခရစ်တော်နှင့်မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း FELLOWSHIP WITH CHRIST
၃။ ခရစ်တော်နဲ့အတူလျောက်လှမ်းခြင်း WALKINH WITH CHRIST
Read more: သခင့်ဘုန်းအမှုတော် သာသနာကို...
အကြီးမြတ်ဆုံးသောဆရာယေရှုခရစ်တော် Jesus Christ The Great Teacher သင်ခန်းစာ (၃)
ပဌမပိုင်းသင်ခန်းစာများမှ သခင်ယေရှုသည် မည်သူနည်းဟူသော အကြောင်းအရာအချို့ကို သင် သိခဲ့ရပြီး။ သူသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အသက်ရှင်ခဲ့သမျှသော သူများတွင် အကြီးမြတ်ဆုံး သော ဆရာလည်းဖြစ်သည်။
Read more: အကြီးမြတ်ဆုံးသောဆရာယေရှုခရစ်တော် Jesus Christ...
ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀အသက်တာ Jesus Christ Our Life!
ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀အသက်တာ - ရဲလင်းထွန်း
Jesus Christ Our Life!
ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ ငါသည်သင်တို့၌ရှိသည်ကို ၄င်း၊ ထို့နေ့၌သင်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ (ယော ၁၄း၂ဝ)
သုံးနှစ်ခွဲ ကာလအတွင်း သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့်စကားပြောရန် အတူသွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သူ၏ သာသနာ ပြု လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီးစီးတော့မည့်အချိန်တွင် သခင်ယေရှုသည် သူ၏သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ခမည်းတော်ထံပြန်မည့် အကြောင်းများကို တပည့်တော်တို့အား ပြောပြခဲ့သည်။ သူတို့ချည်းသာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ချန်ထားခဲ့မည်ဟု သခင်ယေရှု ဆိုလိုခြင်းလား? လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှုက 'ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှာ စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ ငါလာဦးမည် ဟူ၍' ပြောပြခဲ့သည်။(ယော၊ ၁၄း၁၈)
Read more: ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀အသက်တာ Jesus Christ Our...